Ewebata Factlọ Ọrụ Ntanetị: Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Dị Nwere | Martech Zone
Mgbasa ozi ekwentị na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ngalaba na-eto ngwa ngwa ma sie ike nke akụ na ụba ahịa ụwa. Dabere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-azụ ahịa Magna, mgbasa ozi dijitalụ ga-akarị mgbasa ozi TV ọdịnala n'afọ a (ekele kachasị na mgbasa ozi mkpanaka). Ka ọ na-erule 2021, mgbasa ozi mkpanaka ga-abawanye na $ 215, ma ọ bụ pasent 72 nke ngụkọta ego zuru ezu mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ya mere, olee otu akara gị ga-esi pụta ìhè na mkpọtụ ahụ? Na AI na-elekwasị anya n'ihe ahịa naanị otu ụzọ iji dọta uche bụ iji wepụta ihe okike.
Ma ndị na-azụ ahịa na-ahụkarị ka mgbasa ozi ekwentị na-arụ ọrụ taa dị ka iwe ma ọ bụ mkpasu iwe. Otu nnyocha Forrester ahụ hụrụ ndị ahịa na-akọ akụkọ ahụ Pasent 73 nke mgbasa ozi ekwentị hụrụ na a ahụkarị ụbọchị ida ike a mma ọrụ ahụmahụ. Maka ndị ahịa, nke a pụtara na mgbasa ozi mkpanaka ha anaghị arụ ọrụ nke ọma. On nkezi, $ 0.55 nke ọ bụla dollar nọrọ na mobile ad mkpọsa na-adịghị na-amị tangible mma uru maka nzukọ.
Ọ bụ ya mere anyị ji mepee Creativelọ ọrụ okike ™, a drọ na-dobe mobile ad studio na-enye ohere ụdị, ụlọ ọrụ okike, ndị na-ebipụta akwụkwọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi iji mepụta mgbasa ozi maka ekwentị na desktọọpụ. Ihe ngosiputa nke onwe nke a diri HTML5 iji nyefee mgbasa ozi na-ebute ngwa ngwa na nke oma n'enweghi ihe omuma nzuzo choro na onu ahia. Mgbasa ozi ọ bụla dị iche, na-agbanwe agbanwe na gburugburu ya, ma nke kachasị mkpa, itinye aka na ịkọ akụkọ.
Njirimara miri emi nke ikpo okwu na obere atụmatụ na-enye ohere ka mgbasa ozi ọ bụla bụrụ ihe pụrụ iche na mkpọsa ọ bụla ịpụta. Ikpo okwu na-eji wijetị na omume iji dochie nzuzo; Dọrọ na Drop, Nlele na Ngwaọrụ, Ndebiri, na Ọnọdụ Canvas mepere emepe bụ mgbidi ụlọ nke ikpo okwu. Atụmatụ ndị a gụnyere: Vidio dịpụrụ adịpụ, Ihe Okike Dynamic, Ọnọdụ, Egwuregwu & Mgbagha, Mkparịta ụka na Cross Screen, na ndị ọzọ.
Factlọ ọrụ na-emepụta ihe bụ ọrụ onwe onye ma dị mfe iji, na-etinye ụkpụrụ atọ dị mkpa:
Wijetị: wepụ mkpa ịdebanye aha
achụ: kọwaa mgbe ihe mere
Action: chọpụta ihe omume na-eme.
Site n’ememe ndị isi atọ a, onye nrụpụta ọ bụla nwere ike ịmepụta ọkaibe, na-anabata ma na-etinye HTML5 Mgbasa ozi.
Anyị kwenyere na itinye ihe edemede edemede ọkachamara n'aka ndị ahịa niile, nnukwu ma ọ bụ obere, ga-ekwe ka mgbasa ozi na-etinyekwu aka na ya wee nwekwuo ọfụma, nke a dịkwa oke mkpa na oge ebe ọkọlọtọ ọkọlọtọ na ndị na-egbochi mgbasa ozi na-eme ka o sie ike na sie ike iru ndị na-ege ntị ma ọlị.
Ad igbochi bụ ezigbo ihe ịma aka maka ụlọ ọrụ. Otu akụkọ nyocha nke BI chọpụtara na okporo ụzọ mkpanaka na-ahụ mgbasa ozi mgbasa ozi okpukpu atọ karịa nke desktọọpụ. Nke a bụ nnukwu ihe iyi egwu nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ na-adabere na mgbasa ozi maka ego ha nwetara. Ọ bụrụ na igbochi mgbasa ozi na ekwentị ruru ọkwa ọkwa desktọọpụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ dijitalụ nke United States nwere ike tufuo ihe ruru ijeri $ 9.7 gafee ụdị mgbasa ozi dijitalụ n'afọ ọzọ.
Factlọ ọrụ okike, ngwaahịa nke abụọ anyị ejirila afọ ole na ole zaghachi ndị ahịa anyị ma kee ya ka ọ dị nro ma nwekwaa usoro nke ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi bara ụba ebe ị na-enye atụmatụ dị mgbagwoju anya iji kwe ka nhọrọ okike na-adịghị agwụ agwụ. Anyị kwenyere na ọ bụ mmeri mmeri maka ụdị na ndị ahịa.
Tags: ihe okikeOhu ihuenyoIhe Okike Dynamicegwuregwuebemgbaghamobile mgbasa ozimobile ad studioMpaghara vidiyoanabata